२७ वाणिज्य बैंकको ५ वर्षको लाभांश इतिहास, कसले कति दिए ?
काठमाडौं : सेयर बजारमा लगानी गर्नुपूर्व सम्बद्ध कम्पनीको वर्तमानसँगै विगत अवस्था र लाभांश इतिहास थाहा पाउन आवश्यक हुन्छ । किन भने कम्पनीहरुले विगतमा कुन अनुपातमा लाभांश वितरण गर्दै आएका थिए ? वृद्धि अनुपात कस्तो रह्यो लगायतका बारेमा जानकारी लिन सके भविष्यका बारेमा पनि आँकलन गर्न सजिलो हुन सक्छ । हुन त विगतकै आधारमा भविष्यको ठ्याक्कै अनुमान गर्न सकिंदैन । कतिपयले व्यापार रणनीति बदलेका हुन सक्छन् । कमजोर संस्था सबल बनिसकेको पनि हुन सक्छ ।
मर्ज तथा एक्विजिसन, पुँजी वृद्धि, व्यवस्थापन र सञ्चालक समितिमा आएको परिवर्तन लगायतका कारणले कुनै पनि कम्पनीको आगामी रणनीति, व्यापार विस्तार र लाभांश क्षमतामा अर्कै प्रभाव पार्न पनि सक्छ । यसर्थ, आम लगानीकर्ताले यी पक्षहरुमा पनि ध्यान दिन आवश्यक हुन्छ । तर यति हुँदाहुँदै पनि विगतको अध्ययन निकै आवश्यक हुन्छ । यसैक्रममा हामीले नेप्सेमा सूचीकृत वाणिज्य बैंकहरुले यस वर्ष र विगत वर्षहरुमा कसरी र कुन अनुपातमा लाभांश वितरण गरेका थिए भनेर प्रस्तुत गरेका छौं ।
तर अहिलेसम्म पनि सूचीकृत वाणिज्य बैंक मध्ये सेञ्चुरी कमर्सियल बैंकले भने लाभांश प्रस्ताव गरेको छैन । वाणिज्य बैंकको ५ वर्षको लाभांश दर हेर्ने हो भने बोनस र नगद दुवै दिएको पाइन्छ । तर पछिल्लो पुँजी वृद्धिपछि भने बैंकहरुले नगदमा जोड दिएका थिए । यस वर्षदेखि फेरि नगद र बोनस दुवै मिलाएर सन्तुलित हिसाबले लाभांश दिएका छन् । वाणिज्य बैंकको ५ वर्षको लाभांश इतिहास हेर्दा नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७२–०७३ को मौद्रिक नीतिमा २०७४ असार मसान्तभित्र न्यूनतम चुक्ता पुँजी ८ अर्ब हुनुपर्ने व्यवस्था गर्यो ।
यसअघि वाणिज्य बैंकको न्यूनतम चुक्ता पुँजी २ अर्ब रुपैयाँ तोकिएको थियो । त्यससता चुक्ता पुँजी वृद्धिको दबाबमा परेका वाणिज्य बैंकले २ वर्षसम्म बोनस सेयरलाई प्राथमिकता दिएका थिए । ८ अर्ब पुँजी पुर्याएपछि फेरि नगदमा जोड दिएको देखिन्छ । हेरौं ५ वर्षमा कुन वाणिज्य बैंकले लगानीकर्तालाई कति लाभांश दिए :
#जनता बैंक नेपाल केही समय पहिले ग्लोबल आइएमई बैंकसँग मर्जरमा गए पनि गत वर्षको नाफाबाट लगानीकर्तालाई लाभांश प्रस्ताव गरेकाले यहाँ समावेश छ ।
चीनमा १ लाख ४१ हजार ४०० किलोमिटर रेलवे विस्तार
थप ३३८ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, अरु ४ जनाको ज्यान गयो
नेपाल बंगलादेश बैंकको २ अर्बको ऋणपत्र आउँदै, यस्तो आयो रेटिङ
सोल्टी होटलको बोनस सेयर तपाईंको खातामा
बीओकेको संस्थापक सेयर लिलामीमा : सर्वसाधारणले पनि पाउने, भाउ कति ?
सिद्धार्थ बैंकले कस्तो सार्वजनिक गर्यो वित्तीय विवरण ?